ဧပြီလ 12, 2018
အလုပ်ရှာသူများအတွက်ဗီဇာဖြင့်ဒူဘိုင်းအလုပ်များ။ နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ကြသည် ဒူဘိုင်းမှာအလုပ်ရှာနေ? ။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအတွက်ဆောင်းပါးများစွာပြီးနောက်။ ငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် waသငျသညျအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုတက်ကြည့်ရှုကူညီပေးနေဖြစ်ကြောင်း YS နှင့်အကြံပြုချက်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလူတွေကိုအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေကူညီပေးနေ။ လူကြိုက်အများဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ကြောင်းအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုမှာဗီဇာရှိခြင်းမရှိပါ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ link ကို page ကိုရောက်လာကတည်းက။ သင်သည်သင်၏လက်၌ဗီဇာရှိခြင်းနေကြသည်။
သငျသညျယခုအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ အမြဲအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်လက်ပေးခြင်း။ အထူးသဖြင့်ပါကစ္စတန်နှင့်အိန္ဒိယကနေပြည်တော်ပြန်များအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့အကူအညီပေးပါသည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LinkedIn တို့ profile များကိုအရသိရသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်ကနေနယူးပြည်တော်ပြန် နှင့်မြောက်အာဖရိက။ နေ့တိုင်းစုဆောင်းမှုအထူးကုရှာဖွေနေ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံဉာဏ်ကိုသင်တို့အဘို့အထောကျအကူပွုဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရှာဖွေနှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုစျေးကွက်၏နည်းလမ်းများ အလုပ်ရှင်များမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ကပိုအဖိုးတန်စေမည်။
ဗီဇာခေတ်ရေစီးကြောင်း 2019 နှင့်အတူဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက် ကြောင်းဒူဘိုင်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟု 2020 အစီရင်ခံစာ။ ကျိန်းသေ 2020 ကုန်စည်ပြပွဲဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သေချာဘို့စော်ဘွားစျေးကွက်န်းကျင်သစ်ကိုငှါး လုပ်. ရသမျှထမြင်ရပါလိမ့်မည် ဗီဇာနှင့်အတူ ချက်ချင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေသောအမှုဆောင်အရာရှိ။
100% အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုမဗီဇာဒူဘိုင်းရန်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. မလိုအပ်! ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ခရီးစဉ်ဒူဘိုင်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့လောလောဆယ်တွင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှကူညီပေးခြင်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောရာထူးနှင့်အဘူဒါဘီ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင့်အီးမေးလ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကျွန်တော်လ၏အဆုံးအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆန်ခါတင်စာရင်းဖို့ကွိုးစားပါလိမ့်မယ်ပေးပါ။ ရန်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ဖို့မျှော်လင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့ကိုနေရာချ!
ရိုးရိုးသားသား, သင်ပြီးသားအလုပ်ဗီဇာရှိခြင်းလျှင်။ သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သမျှရန်ဖြစ်ပါသည် အိပ်မက်အလုပ်ရရန်မည်သို့ရှာဖွေ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့အခြားတစ်ဖက်ပေးဖြေရှင်းချက်အပေါ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ မိမိတို့ကိုယ်ကိုစျေးကွက်မှကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းရေးအဖွဲ့သည်အကြံဥာဏ်များနှင့်ဆောင်းပါးများကိုထုတ်ဝေရန်အမြဲတမ်းကြိုးစားသည် ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်တစ်ခုမည်သို့ရှာရမည်နည်း.
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီဗီဇာအလုပ်အကယ်၍ သင်သည်ယူအေအီးတွင်အလုပ်ရှာနေလျှင် သင်သိရန်လိုအပ်သည် အဘယ်အရာကိုရှာဖွေစုဆောင်းဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းနေကြသနည်း။ ဘယ်မှာငါဗီဇာရှိပါကဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကုမ္ပဏီကိုရှာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများအပြားန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအများအပြား options များစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ် အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသူများအတွက်။ ပထမဦးစွာကရှာဖွေစုဆောင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းမန်နေဂျာနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပေးနေကြသည် စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အတွက်ဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှုလမ်းညွှန်။ သင်သည်သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးလေးသာရှာနိုင်သည် ဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်။ သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ဗီဇာမရှိဘဲအလုပ်ရှာနိုင်သည်။ ဒါကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး။
သင်ကမင်္ဂလာရှိသောလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးကဲ့သို့ခံစားရသင့်တယ်။ လူတိုင်းမဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အလုပ်ရှာဖွေဖြင့်သင်တို့ကိုနည်းနည်းကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဖို။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့သည်ငါတို့၏လိုကျပါမညျအဖြစ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရပြည်တော်ပြန်များအတွက်ကိုလမ်းညွှန်။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ဆက်မသွားမီ, သင်သည်တတ်နိုင်သည်ဟုမမေ့မလြော့ပါ မိုဘိုင်းကျော်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရှာဖွေရေး။ သင်ကစူပါအပို Laptop ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျအများအပြားအလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ပရိုဖိုင်းကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့သင်အလုပ်ရှင်များမှတဦးတည်းကလစ်ပေးပို့ခြင်း applications များအားဖြင့်အကောင့်စီမံနိုင်သည်။
အဘယ်သို့ငါဒူဘိုင်းအတွက်အများကြီးပိုမြန် start နိုင်သလဲ
ဒါဟာသင်ခက်ခဲတဲ့သကဲ့သို့ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ အလုပ်လုပ်ဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေဤမျှလောက်များစွာသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကျွမ်းကျင်သူများ။ ဥပမာအားဖြင့်, များများရှိ ဖိလစျအတှကျအဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ အလုပ်သမားများ။ ဒူဘိုင်းကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်အိပ်မက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာငှားရမ်းနေသောကုမ္ပဏီများအနက်အများဆုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်ရုံးများထားရှိခြင်း။ အဆိုပါ ကူညီခြင်းလက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီတို့တွင်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အများဆုံးကြောင့်ဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက နိုင်ငံတကာမှာငှားရမ်းနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထိုမေးခွန်းကိုတစ်ဖြောင့်အဖြေကိုရှိခဲ့သည်ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အများအပြားခြေလှမ်းများအစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေ သို့မဟုတ်သင်ဗီဇာမရှိကြပါဘူး။ ကျိန်းသေ, သငျသညျအလုပျအတှကျကြှနျတျောတို့အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ။ သငျသညျဒူဘိုင်း၌ကြီးသောအလုပ်အကိုင်ဆင်းသက်ချင်ပါတယ်။ အမျိုးပျက်သောအမှန်တရား အလုပ်သုတေသနလုပ်နေတာကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး.
သို့သော်သင်သည်ထိုအကြောင်းကိုသိပ်စိတ်ပူစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုသင်အတော်ကြာအရင်းအမြစ်များကိုမိတ်ဆက်စီမံခန့်ခွဲ။ ကျိန်းသေသငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆင်းသက်ကူညီပေးနေသည်။ ၏အကြံပေးချက်များနှင့်-bits အများစုဟာ သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုပိုပြီးထိရောက်စေရန်သုံးနိုငျအကြံဉာဏ်ကို။ အထူးသဖြင့်သင်ကနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ကြပြီးဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များရှာနေလျှင်။
ကျွန်တော်တို့၏ ဒူဘိုင်းဘလော့ဂ် အချက်အလက်များ၏အဖိုးတန်အပိုင်းပိုင်း၏လုံးဝပြည့်ဝ၏။ ငါတို့သည်အပတ်တိုင်းanew blog post ပို့စ်တင်နေကြသည်။ ကျွန်တော်ဆောင်းပါးတွင် post အခါတိုင်း။ ကျနော်တို့ကိုသင်ဒူဘိုင်းအတွက်အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုကူညီရှာဖွေဖို့ကဖန်တီးပြီမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ကိုတစျဆငျ့သငျသညျလမ်းလျှောက်စို့ သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုအမျိုးမျိုးသောအရင်းအမြစ်များကို.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအောက်တွင်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ပေး။ လက်ရှိတွင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ငှားရမ်းအများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။ မှ အလုပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီများမှ, အထိ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီများသည်။ ဗီဇာအတည်ပြုလုပ်သားများနှင့်အတူဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များတစ်ခုအဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကိုသင်အောက်ပါကုမ္ပဏီများမှနိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာကျိန်းသေသင်ပြီးသားဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီးအတွက်ဗီဇာရှိခြင်းနေကြသည်လျှင်သင်အထူးသဖြင့်အလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်ကူညီပေးသည်။ ကုမ္ပဏီများ Bayt.com, linkedin, နှင့် Facebook ပေါ်မှာ right ယခုငှားရမ်းထားပါသည်။
သင်အသုံးပြုနိုင်သောအများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ် အမ်းမရိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အလုံခြုံမှ။ ထိပ်တန်းစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ မှစ. အစိုးရ-related စီမံကိန်းများကိုမှတက်။ သငျသညျကျိန်းသေဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အနေဖြင့်, သင့်ကိုယ်သင်ရသင့်တယ်အောက်တွင်အများအပြားအလုပ်ဆိုက်များအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်တခုပြည်ပရှိအဖြစ်, သင်ဖြစ်ကောင်းမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိခြင်းနေကြသည်။ သငျသညျပံ့ပိုးကူညီခြင်းကိုနေထိုင်ဗီဇာအကြံပေးချက်များအများကြီးရှာတှေ့နိုငျ အသစ်ကပြည်တော်ပြန်များအတွက်။ သို့သော်အလုပ်လုပ်ဗီဇာမျိုးနှင့်အတူ, သင်ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေအများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
Bayt.com သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေစစ်ဆေးသင့်ကိုပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီမှာ။ သင်တန်း၏အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် အင်ဒီးယန်းများအတွက်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ provider က။ သငျသညျကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသူတစ်ဦးကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ Bayt အဆိုပါစုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကကစားသမားများနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်။ ထိုသို့သောလူ့အရင်းအမြစ် Group မှ, Parsons လီမိတက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် Huxley ။
အများအပြားကဆောင်းပါးများဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုကိုဖန်ဆင်းသည်။ Bayt.com အတူသင်တို့လည်းရှာဖွေနိုင်ပါတယ် MBA ဘွဲ့ရပညာရေးနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်။ နှင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အလုပ်အကိုင်များအတွက်။ ထို့အပြင်ဤအလုပ် site ကိုလည်းတပြင်လုံးကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းများအတွက်စုဆောင်းနေပါတယ်။ သငျသညျအပေါငျးတို့သ GCC ကျော်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းကိုသုတေသနနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများမှအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်.
Bayt.com 2000 ထံမှ 2018 မှတက်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဒဏ္ဍာရီဦးဆောင်အလုပ် site ကိုဖြစ်လာသည်။ အတွင်းကြီးထွားဖို့ခိုင်မာတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အပင်လယ်ကွေ့ဧရိယာ. Bayt.com ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကူညီပေးနေ အဆိုပါ GCC အတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သူတို့ကအာဖရိကမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကိုသူတို့ဖြစ်ကြသည် တောင်အာဖရိကပြည်တော်ပြန်ငှားရမ်း။ ကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးအားလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆင့်ဆင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Bayt နီးပါးတိုင်းအတွက်ငှားရမ်း ယူအေအီးအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း။ ထိုမှတပါး regio အတွက်လူမျိုးပေါင်းစုံနေသောပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်n.
ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ
ရှာဖွေနေသူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဗီဇာအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်။ အသစ်နေရာပဲလာနှင့်ဒူဘိုင်းသွားအားလုံးအစုံပါပဲ။ ကုန်စည်ပြပွဲအဓိကစိတ်ကူးဖို့ဖြစ်ပါတယ် 2o2o လူအပေါင်းတို့သည်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်ကမ္ဘာကြီးကိုကြိုဆိုပါတယ်။
အဓိကစိတ်ကူးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအကြီးအစိတ်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူအနာဂတ်ဖန်တီးကူညီပေးပါမည်။ အဆိုပါနေရာအောက်တိုဘာလ 20 ၏ 2020th အပေါ် start သငျ့သညျ။ ဒါကပထမဦးဆုံးကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည် အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်း။ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်။ ကျင်းပမဲ့နေရာအရှေ့အလယ်ပိုင်းရာအရပ်ကိုကြာကြောင့်ဖြစ်သည်။ သေချာများအတွက်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၏အစိုးရကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်လက်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်။
အာဖရိကသို့မဟုတ် South အာရှနှင့်အတူ။ အဆိုပါကုန်စည်ပြပွဲ 2020 စီမံခန့်ခွဲမှုကျိန်းသေအသစ်တစ်ခုကိုစာချုပ်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအဘို့အခွင့်အလမ်းများထို့ပြင်တစ်လူအစုအဝေး။ ဒါ့အပြင်သေချာများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်သစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများကိုငှားရမ်းအသစ်အလုပ်ရှင်များပေးရန်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးအိမ်ခြံမြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်နှင့်အတူ ဧညျ့အလုပ်အကိုင်များ, ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်လေကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်း။
အဆိုပါအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများပြီးသားရှာဖွေနေအလုပ်စီမံခန့်ခွဲသင့်ပါတယ်။ Dirhams ဘီလျံတန်ဖိုးရှိသစ်ကိုကန်ထရိုက်ကုန်စည်ပြပွဲစတင်မတိုင်မီလမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြလိမ့်မည်လို့ပဲ။ ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အလှဆင်ရန်ပါလိမ့်မယ် အင်ဒီးယန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အအလားအလာ။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အများအပြားအသစ်ကကန်ထရိုက်တာများရှိပါသည်။ ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ဒူဘိုင်းမှလာမယ့်သည်နှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုများများကသင်တို့အဘို့ပေါ်ထွန်းစေမည်။ ဒါကြောင့်, နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်နှင့်လက်ျာအချိန်တွင်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း upload တင်ကြဘူး။ သင်၏ CV ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်သည့်အခါဒါဟာကိစ္စပါပဲ။ ငှားရမ်းမန်နေဂျာအချို့စီစဉ်ထားအချိန်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ အခါအလုပ်လျှောက်လွှာကိုပေးပို့ဖို့ကိုငါသိ၏။
ဒါကြောင့်သင်ကဥပဒေရေးရာ, အခွန်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေနေခြင်းနှင့်နေရာလွတ်အကောင့်လျှင်။ သငျသညျ 2019 နှင့် 2020 န်းကျင်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်များကိုလယ်သငျသညျသငျ့သညျ သူတို့လမ်းမဟုတ်တော့စုဆောင်းကြောင့် 2018 အတွက်လျှောက်ထား။ နှင့်အဆုံး၌, ငါတို့ FMCG နှင့်အတူဆေးဝါးရှိခြင်းနေကြသည်။ ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 စတင်ပါလိမ့်မည်မတိုင်မီထိုအခါ Boutique ဒေသခံစျေးဆိုင်အလုပ်လျှောက်လွှာနှင့်အတူလက်လီများအတွက်လအနည်းငယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများအဘို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသငျသညျပြီးသားအနေအထားရှိသင့်ပါတယ်။
ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ join ဖို့ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
linkedin ယူအေအီးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံဒူဘိုင်းဈေးကွက်ကနေပြည်တော်ပြန် LinkedIn မေတ္တာရှင်နေကြသည်။ သို့သော်ဤလူမှုကွန်ယက်အဓိကအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်တည်ဆောက်ထားသည်။ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းရှာဖွေ။ ယူအေအီးအလုပ်ဈေးကွက်ထဲကနေနှင့်အခြားဆက်စပ်ချိန်း။ သငျသညျအကောင်းတစ်လမ်းအတွက်အသုံးပြုပုံကိုသိလျှင် LinkedIn တို့ကအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ယူအေအီးအတွက် posted အများအပြားအလုပ်အကိုင်များစီမံနိုင်သည်။ ဥစ္စာ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဆက်သွယ်မှုထွက်ရှာဖွေခြင်းအဘယ်မှာသူတို့ငှားရမ်းထားပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးအုပ်စုများ join ဖို့စီမံနိုင်သည်။ ဥပမာ ဒေသခံဒူဘိုင်းအဖွဲ့များ။ အဆိုပါအုပ်စုများကျော်, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်များငှားရမ်းအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အလုပ်ရှာဖွေနေစဉ် linkedin ကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေသည်။ သငျသညျဥပမာအချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပျ, အစစ်ဆေး LinkedIn အဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများအဘို့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်။ သငျသညျစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ဘယ်လိုစုဆောင်းမှုအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်။ အဘယ်သို့ပညာရှင်ပီသစွာသင့်ရဲ့အလားအလာအလုပ်ရှင်များချဉ်းကပ်ဖို့။ အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေ။ အဆိုပါ linkedin အလုပ်အကိုင်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည် တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာလူမှုရေး profile များကိုစစ်ဆေးနေကြဘူး၏ 80% ကျော်၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာတစ်ခုမှာဘယ်လိုလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည် သင်ကြားရေးအလုပ်အကိုင်များ၌သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ။ သင်ပြုကဲ့သို့တူညီသောပညာရေးမှတဆင့်သွားကြပြီလာသောလူများ။ ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ နှင့်သင့်ပညာရေးကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်အလုပ်ရှာနေလျှင်။ အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မြင့်စီမံကိန်းများသို့မဟုတ်ဗီဇာနှင့်အတူသစ်ကိုအကြီးတန်း-Level ရာထူးနှင့်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များသည်။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် သင့်ရဲ့ LinkedIn အစက်မရှိသောကိုယ်ရေးအချက်အလက်အောင်။ ဤသည်မှာလူမှုကွန်ယက်ကိုသင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ခုပြည်ပရှိဖြစ်လာမှကူညီပေးပါမည်။
AngelList ကုမ္ပဏီကအကောင်းဆုံးအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်မြင့်တက်ကုမ္ပဏီများမှပေါ်တွင်အလုပ်ရှာနေကြသူအမှုဆောင်အရာရှိသည်။ ဒီ website အသစ်သောကုမ္ပဏီများနှင့်စတင်ဘို့ 2010 အတွက်နေသူများကဖန်တီး။ ထိုမှတပါး, သငျသညျအများအပြားကောင်းကင်တမန်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ မှတစ်ခုဖြစ်သော တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများမှ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ သိပ်အများကြီးမရှိပါ ပါကစ္စတန်ကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများ သို့မဟုတ်အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်။ ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, အချို့ကိုသင်အားသာချက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာ အလွန်အမင်းအတွေ့အကြုံရှိ job- များအတွက်ရှာဖွေနေသူ သူကိုစတင်ကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ Angel.com နည်းပညာစတင်များအတွက်အခြေခံမိတ်ဆက်ကုမ္ပဏီအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ operating စတင်ရန်အမြိုးအနှယျရန်ပုံငွေလိုအပ်။ ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့အချိန် 2015 ၌ရှိ၏။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျရှာတှေ့နိုငျ အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်ခြင်းက start-ups။ ထိုကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲသူကထွက်စစ်ဆေးပါ။ ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်, သင်စတင်စဉ်းစားနေကြတယ်ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်အခါ။
ထိုအချိန်မှစ. ထို Angel.com က်ဘ်ဆိုက်စတင်ကောင်းကင်တမန်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှရန်ပုံငွေခွင့်ပြုပါတယ်။ အတော်ကြာသစ်ကိုစတင်လူထုအုံကြွမှုရှိပါတယ် အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းကနေကုမ္ပဏီများမှ။ ယူအေအီးကနေသူများအခွအေနအသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအောက်မှာဒါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကိုအခြားသူများဖိတ်ခေါ်စကားပြောခြင်း။ Angel.co အခြားလူမှုရေးကွန်ယက်အတော်လေးဆင်တူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲအဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှာဖွေစုဆောင်း သူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။
နောက်ထပ်အလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းန်ထမ်းခေါ်ယူမှု။ သငျသညျအများအပြားအလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများမှ join လို့ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသောလူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအုပျစုတွင်, သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့်အတူစကားပြောနိုင်ပါတယ်။ အခြားအပြည်တော်ပြန်နှင့်အတူနှင့်ပိုပြီးစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ ယခုအချိန်တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် အသစ်ကပြည်တော်ပြန် အဘယ်သူသည် WhatsApp ကိုအပေါ်အလုပ်ရှင်ရှာဖွေနေကြသည်။
ယခု မှစ. ပိုပြီးတောင်းဆိုမှုကိုရှိခြင်းဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအုပ်စုများကျော်။ ဒူဘိုင်းမြို့နေ့တိုင်းကြီးထွားလာသည်ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ဧည့်သည်များနှင့်အတူ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူတစ်လွယ်ကူသောသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအလုပ်ရှာတွေ့မှစူပါကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ။ အထူးသဖြင့် ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်ပြည်တော်ပြန်။ ပစ်မှတ်ရောက်ရှိရန်အလွန်အမင်းခက်ခဲအလုပ်လုပ်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက် Facebook က
အထိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမန်နေဂျာကနေ MENA အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်။ ဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေကြသူယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အနိဂုံးစာရင်းဖြည့်စွက်ဖို့နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ။ ကျနော်တို့ကိုလည်း facebook ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ် ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းနေသောကုမ္ပဏီများစာရင်း။ Facebook မှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလည်းကန်ထရိုက်တာများငှားရမ်းသည်။ သငျသညျ Facebook ပေါ်မှာစာချုပ်အခန်းကဏ္ဍအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင် ?. သငျသညျကျိန်းသေအဆိုပါသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် Facebook ကကန်ထရိုက်တာအခွင့်အလမ်းများ အလုပ်အကိုင်အ site ကို။
သင်တစ်ဦးဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ သငျသညျက Facebook အတွက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းယဉ်ကျေးမှုအခြားလူများနှင့်စကားပြောနှင့်အလုပ်သစ်ရှာဖွေ။ ဤသည်ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီ Facebook ရဲ့ 2009 ကတည်းကဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုခေါ်တွင်။ သင်လိုအပ်သူတို့နှင့်အတူတစ်မစ်ရှင်ရှိပါတယ် လူတွေကိုတခြားသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းမျှဝေဖို့ပါဝါပေးရ။ နှင့်ကမ္ဘာကပိုပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ကနေဒါကနေအိန္ဒိယကို, ကူဝိတ်ကနေစင်္ကာပူရန်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အလုပ်လုပ် ဒူဘိုင်းအတွက်နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် Facebook မှာအတူ။
အင်တာနက်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ဖို့အစင်းကိုကူညီပါ။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့ထိပ်တန်းငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီ rated နေကြတယ် US မှာ ယခုအချိန်တွင်သူတို့ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်အသစ်တခုကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်သင်လုပ်နိုင်သည် အိန္ဒိယတွင်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရ, Dublin နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့။ သို့သော်သူတို့ 2020 အတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလူတွေပိုပြီးငှားရမ်းရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ ယခုအချိန်တွင်အစင်းကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အစင်းသွား, ကျန်းမာရေးအာမခံပေး နှင့်ရူပါရုံကိုသင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ။ အသက်အာမခံနှင့်မသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါအစင်းမျှော်လင့်နေပါတယ် ပြည်ပမှာအနေဖြင့်လည်းနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အပေါ်ပိုပြီးမန်နေဂျာငှားရမ်း။ နောက်ထပ်အားသာချက်ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့မိဘခွင့်နှင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ထောက်ခံမှု paid ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့် အသစ်သောဆက်ပေးသူများအတွက်သူတို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်ချိန်နှင့်အတူကူညီခြင်း။
အစင်းလည်း 401 (ဋ) အစီအစဉ်သည် သူတို့ရဲ့အသစ်များကိုန်ထမ်းများအတွက်။ သူတို့ကခြွင်းချက်ကျန်းမာများနှင့်ခရီးသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျော်ရှိခြင်းနေကြသည်။ အစင်းနှင့်အတူ, သင်ကယှဉ်ပြိုင်အားလပ်ရက်မူဝါဒအရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်အနေအထားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းနံနက်စာ, နေ့လည်စာနှင့်ညစာပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကငွေပေးချေမှုစနစ်ကအလုပ်ကိုင်စွဲဖို့ရှာဖွေနေလျှင်။ Stripe ဟာအတူနေတဲ့အလုပ်ကိုရယူလိုက်ပါ, အခြို့သောအကြိုးကြေးဇူးမြားတည်နေရာအလိုက်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအများကြီးရှိခြင်းကြောင့်ဒါပေမယ့်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်စတင်ရန်ကျိုးနပ်သည်။
Uber အလုပ်ရှာဖွေရေးယူအေအီးအတွက် Start
Uber ကလူနေ့တိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့ရာတစ်ခုခုတည်ဆောက်နေသည်။ အဆိုပါ2မိအတွက်တက္ကစီနှင့်တူတစ်ခုခုပျောက်မောင်း။ Uber နှင့်အတူသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်အပြီးအလုပ်ရ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်၌အားကြီးသောယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့်အတွေ့အကြုံများကားမောင်းတဲ့သဘောမျိုးရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Uber နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ် သင်အစာရှောင်လမ်းအတွက်အစားအစာများကိုစားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသိပါလိမ့်မယ်။ ကျိန်းသေသင် clients များချင်ရာအရပ်မှလုံးဝဘာမှ၏ကြီးမားသောတင်ပို့ရောင်းချမှုရွှေ့ဘယ်လောက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Uber နှင့်အလုပ်လုပ်အလုပ်ချိန်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုလိုအပ်ပါတယ်။ Uber နှင့်အတူတစ်ဦးကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာကဏ္ဍများတွင်သစ်ကိုရွေ့လျားစေတယ်။ ကမ္ဘာစံကနေရှေ့ကိုအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများစီမံနိုင်သည်ထက် ပို. စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များ။ သို့သော် Uber အတူလုပ်ကိုင် ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုရှိသေး၏။ ကလူအများစုဟာသောအလုပ်သငျသညျကို သိ. ဒါကြောင့်အခြားသူတွေအနာဂတ်ကိုပုံဖော်ကူညီပေးပါမည်ပါဘူး။ ထိုသို့သောလေဆိပ်ကနေသူတို့ကိုထကောက်နေနှင့်မြို့များသို့ရောက်ရှိအဘို့ထိုသူတို့နှင့်အတူကားမောင်းအဖြစ်။ ထိုတောက်ပအနာဂတ်မှရတဲ့သငျသညျကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။ မဖော်ပြသူတို့အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း application များရှိခြင်းနေကြသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအဘို့လည်းကြည့်ဖူး ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက် cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များ။ အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုပင် Uber နှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်ရခဲ့တယ်ခဲ့ကြပေမည်သိတယ်။
Operation Manager အဖြစ်အလတ်စားနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း
အဆိုပါအလတ်စားမစ်ရှင်ရှေ့ဆက်စဉ်းစားရွှေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အထိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း copywriting ထံမှ ဘလော့ဂါများအတွက်အကောင်းဆုံးဦးဆောင်ပေးသူ။ ဘလော့ဂ်နှင့်အတူယနေ့ပုံဖော်အရေးပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါသည်။ ရိုးသားအရေးအသားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှတဆင့်နဲ့နောကျ 100 နှစ်ပေါင်း။ ကျိန်းသေလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်စကားလက်ဆုံရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအလတ်စားကုမ္ပဏီစံ, အသင်းဖော်များအတွက်မဟုတ်ပါရှာဖွေနေ အလုပ်သမားများ။ တဖန်သင်တို့ရှာနေလျှင် ဒူဘိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်များ သင် ... သင့်တယ် ဒီစိန်ခေါ်မှုကြိုးစားကြနှင့်တစ်ဦးအကြီးအအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့.
အလတ်စားနောက်ခံနှင့်အတူလူတွေ, အလွန်အမင်းအရည်အချင်းပြည့်အထူးကုများနှင့်ဘဝအတှေ့အကွုံမှာမတူကွဲပြားမှုတွေရှာဖွေနေ။ ဥပမာ, သငျသညျဘလော့ဂ်များသတင်းမေတ္တာရှင်လျှင်။ ဤ အလုပ်အကိုင်အဒူဘိုင်း၌သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့တည်ထောင်သူအရှိဆုံးေူပာင်းလဲရေးကိရိယာများနှစ်ခုပူးတွဲဖန်တီး အွန်လိုင်းအတွေးအခေါ်များမျှဝေမှုအတွက်, ဘလော့ဂါနှင့် Twitter ။ သင်ဤကုမ္ပဏီ join မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သင်ကလက်ျာလက်၌ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ကောင်းသောအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းနေကြသည်။ ဒီတော့ Medium.com သင်တို့အဘို့ကောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်သင်အံ့သြဖွယ်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကို။ အလတ်စားနှင့်အတူအရှုံးသမားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် Fight ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားဟန်နှင့်စာနာကဒီအလုပ်ဟာအဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလတ်စားစကားလုံးများကိုနေဆဲတစ်ခုခုဆိုလိုခစျြတဲ့သူကလူငှားရမ်း။ သငျသညျကဲ့သို့မြည်? သူတို့ကိုစကားပြောသင့်ရဲ့ updated CV ကိုပေးပို့ ဒူဘိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်.
စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးအပေါ် Facebook မှာအတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
အဆိုပါ Facebook ကို Inc မှမစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်သောလူ။ အဓိကစိတ်ကူးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တစ်ဦးနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရောက်ရန်အခြားသူများကိုကူညီပါ။ ထို့အပြင် Facebook ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွကမ္ဘာကြီးဆောင်ခဲ့မျှော်လင့်။ Facebook ကသတင်းထံမှသတင်းအားလုံးအင်တာနက်ကိုကျော်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်တွေ့ကြုံတတ်၏။ အဆိုပါစျေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကြီးမားနှင့်ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်, ဒူဘိုင်းအတွက် Facebook မှာအတူအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာ သင်တို့အဘို့အဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်သင့်သည်။
Facebook မှာ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများကိုနှင့်အတူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့က တစ်စမတ်အသင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းသော။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအပေါ်နှင့်ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဖြေရှင်းချက်။
သငျသညျကတည်းက အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထား ရဲရင့်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ သူတို့မှစီးဆင်းအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအများကြီးရှိခြင်းကြောင့်, အရှုံးမပေးဘယ်တော့မှမ ပင်ဖိလစျကနေဒူဘိုင်းမှ။ အဆိုပါလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှကြီးထွားလာနေသည် ပိုကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများဆောက်လုပ်ဖို့လူတိုင်းအတွက်ပိုမိုချိတ်ဆက်ကမ္ဘာကြီးကို။
ဒူဘိုင်းအတွက်အကြီးတန်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ငှားရမ်း Facebook က။ သူတို့ကဒီဇိုင်နာများနှင့်စျေးကွက်မှအင်ဂျင်နီယာများကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာကြ၏။ သငျသညျကို Facebook နှင့်အတူရနိုင်နီးပါးမည်သည့်အခွင့်အလမ်း။ အဆိုပါ Facebook မှာလူမှုမီဒီယာဈေးကွက်မှာအလုပ်မလုပ်သောလူအားပေးပါ။ ဒါကကုမ္ပဏီကယ့်ကို လူတွေဘဝတွေကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအောင်။ သင်တစ်ဦးခြားနားချက်အောင်၏တာဝန်ခံဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေသည့်အခါလူမှုရေးမီဒီယာလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းဒါ, သငျသညျအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်မှအဘယ်သူမျှမန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။
Google အလုပ်အကိုင်များ ဒူဘိုင်းအတွက်
Google Now ကိုကုမ္ပဏီများအတွက်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Multi-ဒေါ်လာသန်းအဖွဲ့အစည်းက။ Google ကအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်သင့်အား3ခြေလှမ်းများသွားရပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာ သငျသညျကွီးစှာသောအခန်းကဏ္ဍကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိပ်တန်းရာထူးနှင့်ပတ်သက်ပြီးနက်ရှိုင်းသောသုတေသနလုပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အပါဝင်သည် ဒူဘိုင်း သင့်ရဲ့နေရာလွတ်ရှာ။ တစ်ဘောလုံးကိုပြေးရဖို့, ထုတ်စစ်ဆေး Google ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံပေးချက်များ သငျသညျလျှောက်ထားမီ။
Google ကနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာတွေ့၏ဒုတိယတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအင်တာဗျူးများဖြတ်သန်းနေသည်။ The HR မန်နေဂျာသင်အမြင်များ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အနေဖြင့်မေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ code နဲ့က HTML, Joomla နှင့်အခြားအဘို့အအိုင်တီမေးခွန်းများကို related ။ Google ကအမြဲကွဲပြားခြားနားအင်တာဗျူး အခြားသူများအားနှိုင်းယှဉ်။ သငျသညျအင်တာဗျူးများ၏ကြင်နာအတှကျပွငျဆငျကိုကူညီအချို့သောအချက်များရှိပါသည်။
သင်၏လျှောက်လွှာအောင်မြင်သောဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ။ ထိုအခါက Google မန်နေဂျာကနဦးဖုန်း screen အားဖြင့်သင်တို့ယူပါ။ အသစ်ကသမ္မတလောင်းပြီးနောက်သူတို့တစ်တွေနည်းပညာပိုင်းအင်တာဗျူးအဘို့အသငျသညျကို set up လိမ့်မယ်အခြေခံစမ်းသပ်မှုဖြတ်သန်းပါလိမ့်မည်။ နှင့်မျှမကိစ္စကိုသင်က Google သင်တို့အဘို့တစ်ကုဒ်စိန်ခေါ်မှုလည်းပါဝင်သည် coding အကြောင်းကိုသိ။ သင်သည်ထိုအချက်မှာထိုလုပ်ငန်းစဉ်သောအခါ။ သင်ကအကြီးတန်းမန်နေဂျာနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိခြင်းလိမ့်မည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်သူတို့တစ်တွေယူရန်သင့်အားလိုအပ်နိုင်ပါသည် သငျသညျကို Google မှလာလျှင်ဆင်း.
သူတို့တစ်တွေအလွန်စိန်ခေါ်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ နှင့် Google လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှသာအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်လုပ်သားများရှာဖွေနေ။ Google ကယခုသွား မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှုများအတွက်။ ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းအတွက်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုရဖို့ကျိုးနပ်သည်။ ကျိန်းသေ Google ကစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအတွက်ကြောင့်, ဒူဘိုင်းအနီးဆုံးအနာဂတ်၌ထမြောက်ကြလိမ့်မည်.
ဗီဇာနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုရှာဖွေခြင်းကအများကြီးပိုလွယ်သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုသင်တို့အားယခုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးသည်မျှော်လင့်။ အလုပ်အကိုင်အဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရှာဖွေနေသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့သညျမှထောက်ပံ့ပေးကြောင်းစာမကျြနှာလျှောက်ထားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ သင်ပြုနေစဉ်အတွင်းသင်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များရရှိရန်ကူညီသင့်တယ် ဒူဘိုင်းမှနေရာပြောင်းရွှေ့။ ကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေအတွက်ပိုပြီးအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာကြည့်ပေးပါ Post ကို CV ကို / လွှတ်တင်ခြင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအပိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကနေသွားစောင့်ရှောက်ကျေးဇူးပြုပြီးနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်အတွက်နက်ရှိုင်းသောသုတေသနလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ကိုကူးမယ့်လက်ညှိုးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏အသက်တာသစ်တို့အတွက်.